ई-लिक्विडहरूको अल्ट्रासोनिक स्टीपिing - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
अल्ट्रासोनिक स्टिपिङले ई-तरल / ई-रसको स्वादलाई महत्त्वपूर्ण बनाउँछ।
अल्ट्रासोनिक भण्डारण उपचार दुई प्रमुख फाइदाहरू प्रदान गर्दछ:
पहिलो, अल्ट्रासोनिक स्टिपिङले एक अद्वितीय स्वाद प्रोफाइल प्रदान गर्दछ, जुन पूर्ण, राउन्ड र चिकनी स्वादको विशेषता हो।
दोस्रो, एक औद्योगिक उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिकरेटरसँग स्टिकिंग केहि मिनेट भित्र पूरा भयो – एक नयाँ स्तरमा औद्योगिक ई-तरल उत्पादन लिइरहेका छन्।
किन अल्ट्रासोनिक चलिरहेको छ?
पारंपरिक स्टिपिङको विपरीत, जहां तरल को हप्ता को लागि3महिना सम्म धेरै आवश्यकता हुन्छ, अल्ट्रासोनिक रूप देखि सहायता वाला स्टीपिप गति को प्रक्रिया को एकदम तेजी देखि हुन्छ: अल्ट्रासोनिक cavitation उत्कृष्ट जन हस्तांतरण र निकासी प्रदान गर्दछ ताकि स्टिकिंग समय केहि सेकेन्ड सम्म कम हुन्छ।
अल्ट्रासोनिक स्टीपिङले स्वाद र ई-रसको उमेर बढाउन सुधार गर्छ र यसको तीव्र परिणामलाई अझ बढाउँछ, अझ चन्द्रमा र स्वाद स्वादको प्रोफाइल।
ई-तरल पदार्थको छिटो विस्तारित बजारको साथ, अल्ट्रासोनिक स्टीपिङ विधिले रस निर्माताहरूले उच्च गुणस्तर ई-रसको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ।
अल्ट्रासोनिक स्टिपिङको समयमा, VG / PG मिश्रण स्वाद सामग्रीको साथमा दुरुपयोग गरिएको छ। उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक्स प्रयोग गर्दै, स्ट्यापिङ महत्वपूर्ण रूपमा सुधारिएको छ जसले उच्च स्वाद र अत्यधिक कुशल, द्रुत प्रक्रिया।
अल्ट्रासोनिक स्टीयरिंग को लाभ:
कुनै कठोर रासायनिक अफ-स्वाद छैन
उच्च निष्कर्षण / भण्डारण दर
ई-तरल पदार्थको औद्योगिक उत्पादनको लागि अल्ट्रासोनिक उपकरण
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स ई-तरल पदार्थको परिष्कृत निर्माणको लागि विश्वसनीय उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरू आपूर्ति गर्दछ। चाहे तपाईं सानो मात्रा मा उत्पादन गर्न वा ठूलो मात्रा को प्रसंस्करण मा ठूलो बजार को लागी रुचि हो, हेल्सेचरले तपाईंको आवश्यकताहरु को लागि पूरी तरिकाले उपयुक्त अल्ट्रासोनिक सिस्टम छ।
सानो धेरै उत्पादन को लागि, हाम्रो अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर UP400St वा UIP500hdT बैच वा निरन्तर मोडमा ई-तरल पदार्थ प्रसोधन गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। ठूलो मात्राको व्यावसायिक उत्पादनको लागि, हामी हाम्रो औद्योगिक अल्ट्रासोनिक्स सिफारिस गर्दछौं, जस्तै UIP2000hdT।
अल्ट्रासोनिक स्नानको तुलनामा Hielscher को शक्तिशाली जांच-प्रकार अल्ट्रासोनिक्सको फायदा के हो?
पहिलो र प्रमुख, अल्ट्रासोनिक नलीहरू सामानहरू (जस्तै गहना) सफा गर्ने उद्देश्यका लागि डिजाइन गरिएका छन्। तिनीहरू एक धेरै कम आयाम उत्पादन गर्छन् र ध्वनिक cavitation को प्रभाव sonicated तरल मा धेरै असामान्य हुन्छ। एक अल्ट्रासोनिक स्नान मा तरल देखि एक समान उपचार प्राप्त गर्दैन, उत्पादन गुणवत्ता मा कमी छ – फलस्वरूप अन्तिम उत्पादनको अप्रत्याशित, असामान्य गुणस्तर (जस्तै कठोर स्वाद, ब्याचहरू बीच स्वादको भिन्नता)।
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स’ औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरू उच्च शक्ति अल्ट्रासाउन्ड डेलिभर गर्छन् र धेरै उच्च प्रवृतिहरूमा भाग लिन सक्षम छन्। यसको मतलब छ कि हाम्रो औद्योगिक अल्ट्रासोनिक्स 24/7 अपरेसनमा 200μm सम्मको उत्प्रेरितमा सजिलै संग संचालन गर्न सकिन्छ। हेलस्लेचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणको बलियोताले भारी शुल्क र वातावरणको मागमा परेशानी-मुक्त 24/7 कार्यलाई सुनिश्चित गर्दछ।
के गरिरहेको छ?
घिमिरेको तरलमा ज्वारिरहेको छ त्यसैले स्वादहरू निकाल्न वा नरम गर्न, उदाहरणको लागि कफी वा चिया। ई-तरल पदार्थ / ई-रसहरूको लागि, steeping मतलब एक राम्रो स्वाद प्रोफाइल प्राप्त गर्न उमेर। वाइन वा व्हिस्की जस्ता शराब पदार्थहरूको समान, ई-तरल एक विस्तृत, राउन्ड र चिकन स्वाद प्रोफाइल सिर्जना गर्दछ। परम्परागत रूपमा भण्डारण गरिएको प्रदर्शन धेरै ओएस समय चाहिन्छ। अल्ट्रासोनिक उपचार स्टिपिंग को समयमा रासायनिक प्रतिक्रियाहरु लाई त्वरित गर्दछ ताकि इच्छित परिणाम प्राप्त समय को एक अंश मा प्राप्त हुन्छ।
ई-तरल के हो?
ई-तरल पदार्थहरू पनि vape रस वा ई-रसको रूपमा चिनिन्छन् र भापिसेज र ई-सिगरेटमा प्रयोग हुन्छन्। E-liquids / e-juices को मुख्य अवयव तथाकथित पीजी र वीजी, क्रमशः Propylene Glycol र सब्जी Glycerin को संक्षिप्त नाम हो। भ्यागु-उत्पादन एजेन्टको रूपमा पीजी र वीजी प्रकार्य। ई-तरल पदार्थका लागि आधार तरल प्राप्त गर्न विशिष्ट विशेषताहरू प्रदान गर्न दुवै, पीजी र VG मिश्रित अनुपातमा मिश्रित हुन सक्छ।
पीजी खराब छ, कम चिपचिपापन छ र स्पष्ट उपस्थिति छ जसले ई-तरल थपिएको दृश्यमा जोडिएको स्वाद गर्दछ।
VG ले एक मीठा स्वादिष्ट नोट प्रदान गर्दछ र अधिक भाप बनाउँछ।
सामान्य अनुपात 70/30 देखि 50/50 वीजी / पीजी को बीच हो। उपभोक्ताको स्वादमा निर्भर गर्दछ, VG / PG अनुपात अनुकूलित गर्न सकिन्छ। एक ठूलो भाप उत्पादन संग एक चिकनी vaping सनसनीको लागि, एक उच्च VG अनुपात सिफारिस गरिएको छ। गहिराई मा एक मजबूत vaping अनुभव को लागि गहन स्वाद संग, (तंबाकू धुग जस्तै) एक उच्च पीजी अनुपात अधिक उपयुक्त छ।
ई-तरल पदार्थले निकोटिन समावेश गर्न सक्छ, तथापि त्यहाँ निकोटिन फ्रि ई-रस विभिन्न प्रकारका छन्, जुन केवल स्वाद सामग्रीहरू छन्।
ई-तरल पदार्थका लोकप्रिय स्वादहरू तंबाकू, मन्थहो, टकसाल, चकलेट, कारमेल, दालचीनी, नरिवल, भेनि, जडीबुटीहरू र स्ट्राबेरी, सेब, किवी, आम आदि जस्ता फलका स्वादहरू छन्।
अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर UP400St भाप रस को भण्डारण को लागि
अल्ट्रासोनिक स्टीफिंग प्रभाव: